Kutarisa mukati meValve Steam Deck | Linux Vakapindwa muropa
Valve Steam Deck zvakashamisa vamwe. Kunyangwe paive patove nekubuditsa patent uye runyerekupe, chokwadi ndechekuti havazi vese vaitarisira kuvhurwa kwekombiki yemutambo nekambani iyi, kunyangwe mushure mekukundikana kweSteam Machine, kana iyo Steam Link, uye kunyangwe mushure mekubvisa yako Steam Mutungamiriri. Nekudaro, Valve yakamboshinga kuve neLinux yekutamba muchirongwa ichi.
Zvakanaka, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi Valve koni, kana kana uri kushamisika kuti chii chiri mukati mukati mechikepe chemhepoIpapo uchada vhidhiyo nyowani yakatumirwa paYouTube umo yakavhurwa kiyi yechigadzirwa ichi uye inoratidza izvo zvinoumba, kune vanonyanya kufarira ...
Vhidhiyo yacho yakaiswa neValve pachayo, uye chinangwa chiri zvinoshanda semuenzaniso yevashandisi vanotenga imwe yeiyi consoles uye vanoziva kuti sei uye nei vasingafanire kukanganisa iyo Hardware. Kunyangwe iwe uine kodzero yekuita kudaro, hazvikurudzirwe, nekuti zvinogona kukonzera kukuvara kwemabhatiri uye, chokwadika, garandi ingarasika, nekuti yaisazofukidza rudzi urwu rwekukuvara kunokonzerwa nekuvhura Steam Deck.
Usati waona vhidhiyo, Valve inotaura izvi nezvazvo murondedzero:
«Mumwe wemibvunzo yakawandisa yatakatambira nezveSteam Deck ndeyezvinhu zvirimo uye kana zvichitsiviwa kana kukwidziridzwa. Mhinduro yacho yakanyanya kuomarara pane kungoti hongu kana kwete, saka takaita vhidhiyo yekutsanangura zvese izvo. Spoiler yambiro: Hatikurudzire kuti iwe utsive iwo mativi iwe, asi isu tichiri kuda kuti iwe uve neruzivo rwese rwakakodzera nezve iyo Steam Deck yezvinhu.. "
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Kutarisa mukati meValve Steam Deck